#1 प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सन क्लिप-इन्स बुभ: किन्की घुमेको किन्नुहोस् किन्नुहोस्
रंग महिलाहरु को लागि गुणवत्ता किन्की घुडी बाल एक्सटेंशन
मेरो प्राकृतिक हेयर एक्सटेन्सनमा स्वागत छ, सबै बन्डलहरू, क्लिप इन्स र विग लामो समयसम्म प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ जबकि मोटो घनत्वलाई पूर्णता सुनिश्चित गर्न। एक दशकपछि रंगको महिलाहरूको लागि अप्ठ्यारो बुवा प्रदान गर्ने क्रममा, यो हाम्रो कपालको कपालको मोटाई सम्झौता बिना सस्तीता समावेश गर्न हाम्रो मिशन बन्नेछ।
अफ्रो किन्की घुडी
MNHE सँगको प्राकृतिक प्राकृतिक कपालहरु को लागि हजारहरु को दुनिया भर को दुनियाहरु को लागि जहाजहरु छ, जो सामूहिक रूप देखि दुई चीजहरु संग सहमत हुन्छन्। तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो बन्डलहरू र उच्च गुणस्तर ग्राहक सेवा चाहन्छन् जसले कम्पनीबाट उनीहरूका विकास चरणहरूमा समर्थन गर्दछ। हामी3टाइप गर्न र खान्छौं4कपाल टाइप गर्नुहोस् textures।
शीर्ष गुण प्राकृतिक प्राकृतिक क्लिप-एक्स्टेन्सनहरू
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् कि तपाईं मर्न सक्नुहुनेछ र प्राकृतिक कपाल क्लिप-इनको साथमा तपाईको हेरफेरको लागि आवश्यक अपडेट दिनुहोस्। हाम्रो स्वस्थ क्लिप स्थापना गर्दै, तपाइँ तुरुन्तै तपाइँको क्लिभ क्लप्ससँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो सबै क्लिप किन्की घुमेको बालबालिकाको लागि एक उत्तम म्याच हो। यी वस्तुहरू तपाईलाई अचम्म लाग्दो छ जस्तो लाग्छ कि यसले तपाईंको लिटमा सुन्दर मात्रा थप्दछ। हामी तपाईंको यात्रामा सुरू गर्न उत्साहित छौं; हाम्रो सबै कर्ल तपाईको साथमा राखिएको छ! यसैले विभिन्न शैलियों मा उत्पादनहरु को पेशकश र तपाईंको लागि एकदम सही लग रहेको छ। हाम्रो सबै नयाँ वस्तुहरू र अद्यावधिकहरू बारे जान्न वीआईपी क्लबमा सामेल हुन निश्चित हुनुहोस्।
प्रीमियम किन्की कपाल
हाम्रो afro kinky बाल एक्सटेंशन रंगका महिलाहरु हुन्। बनावट एक बलियो र मोटो बनावट गरिएको प्रकार4स्ट्यान्ड हो। हाम्रो बन्डलहरू र क्लिप-इन्सहरू, wigs र बन्दहरू पूर्ण छन् र निश्चित गर्न निश्चित छन्।
प्रायः अफ्रिकी अमेरिकन जसले हाम्रो किन्की बनावट प्रयोग गर्दछ जुन अवस्थित स्थानहरूमा मिश्रण गर्न। हाम्रो बन्डलहरू स्थापना गर्ने यो प्रक्रिया सबै अवशेषको लागि सजिलो र पूर्ण छन्। न केवल हाम्रा उत्पादनहरू प्रीमियम गुणस्तरको हो जुन तिनीहरू लामो-स्थायी रहेछन्, तर हामीले पनि आफ्ना इन्स्टाग्राममा रहेको ग्राहकहरू बताएका छन् कि उनीहरूको छ वर्षको लागि उनीहरूको छवटा बन्डलहरू छन्। हाम्रो क्यारियरको प्रयोग, बेशक, यो प्राप्त गर्यो।
हाम्रा क्लाइन्टहरूले हामीलाई उल्लेख गरेका छन् कि तिनीहरूले प्रयोग गरेर आफ्नो प्राकृतिक कपाल बढाउन सजिलो छ। तपाईंको कपाल बलियो बनाउन र सुन्दर लगाउने यात्रा एक प्रक्रिया हो। यसैले यहाँ MNHE मा यो हाम्रो क्लाइन्टहरू हेर्न र सुन्दर लगाउन मद्दत गर्न हाम्रो मिशन हो।
हामी जान्दछौं कि हामी संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्डलहरू भण्डारण गर्छौं किनभने हाम्रो ग्राहकहरूले संसारभरि नै आदेश दिएका छन्। जहाँ एक महिला छ जो उनको चाहना छ कि महान् कर्ल प्राकृतिक र अद्भुत देखेर पूरा गर्न चाहन्छ, तपाईं निश्चित हुन सक्नु भएको छ कि हामीले एक उत्पादन प्रयोग गरेका छौं। यो उच्च गुणस्तरको सबैभन्दा सुन्दर प्रतिनिधित्व हो केन्की घुमेको बाल बुवा र ग्राहक सेवा अनलाइन।
यो जस्तो देखिन्छ कि तपाईंको कपाल प्रचुर मात्रामा छ तपाईंको अनुहारको वरिपरि घुमाउँदै जब तपाईं घुमाउरो क्लिप प्रयोग गर्नुहुन्छ-कपाल एक्सटेन्सनमा। तिनीहरू धेरै विभिन्न लम्बाई र बनावटमा पनि आउँछन्।
क्लिप-इन्स किन्नुहोस् जुन एक्स्टेन्सनको साथ प्राकृतिक कपाल मिलाउने सक्षम पार्दछ तपाईंको शैलीले एकै पटक पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गर्दछ र अद्यावधिक गर्दछ। हामी हरेक बनावट, लम्बाइ र विविधताको पूर्ण पूरक प्रदान गर्दछौं जुन तपाई चाहानुहुन्छ। क्लिप-इन्स प्रयोग गरी कटौतीको बढ्दो चरणमा छुट्याउन, वा सीधा कपालबाट प्राकृतिक वृद्धिमा अचम्म लाग्ने चरण धेरै सजिलो हुन्छ। प्राकृतिक कपाल क्लिप-इन्सले बालहरू सजिलै विभिन्न तरिकामा स्टाइल गर्न अनुमति दिन्छ। वेबसाइटमा पोनीटल्स, अप-डिक्स, र ब्र्रिड पनि प्रस्तावित बन्डलहरू छन्। तपाईंको वास्तविक कपालको सुन्दर अवस्थालाई बर्बाद नगरी क्लिपर इन आफ्नो केश विन्यास गर्न उत्तम तरिका हो। आफ्नो किन्की घुमाउरो राख्ने रिमी कुंवारी कपाल बन्डल सम्झौता तपाईंले चाहानु भएको नजरलाई कायम राख्न प्रत्येक दिन सिधा फर्काउनुहोस् वा सिधा पार्नुहोस् बालीको क्षति वा क्षति हुन सक्छ। जब तपाईं घुमावली क्लिपहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाई अद्भुत देख्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका स्थानीयहरूलाई दैनिक आवरणबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ र आँसु खानुपर्छ।
हामी सबै कालो कपाल बनावटमा खान्छौं
त्यसैले यदि तपाईसँग 4A, 4B, 4C त्यसपछि तपाइँले हामीलाई ढाक्नुभयो। हामी धेरै जटिलताहरूलाई उत्तम-हेर्ने बुवाको रूपमा बुझ्दछौं, हाम्रो ढाँचाहरू खोज्न विचार गर्नुहोस्, त्यसोभए हेर्नुहोस् कि तपाईं कस्तो फिट बस्नुहुन्छ। MNHE 100% ब्ल्याक स्वामित्व र सञ्चालन गरिएको अनलाइन ब्रान्ड हो जुन अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिपिंगको साथ 100 भन्दा बढी देशहरूमा ग्राहकहरू सेवा गर्दछ।
यो 10 ", 12" 14 ", 16", 18 "20" 22 ", 24" 26 "28" 30 "बाट ब्यान्डलहरूसँग उल्लेखनीय रूपमा हेर्न मिल्ने MNHEको ध्यान छ। देवहरु ले भन्यो कि उनि पाया कि हाम्रो उत्पादनहरु को सिर्फ मारने को आवश्यकता के हो! यो ब्रान्ड नयाँ कपडा क्लासिक हेर्नुहोस्, "Afro curly hair को बारे मा सत्य। "
MNHE प्रत्यक्ष Instagram फीड
➺ बुढापातीमा दुई जनाको मृत्यु ·
यो सबै गर्मीको रूपमा हुन प्रयास गर्दै '19 LOL 😝 ...
हाहाहाहा !!! @Campuslately · · 😂
दिदीहरू र दिदीहरू तपाईंको खैरो कपाल झर्छन्। गम्भीर ...
म हरेक पटक LOL। म वास्तवमा थोरै बाहिर जान चाहन्छु ...
Y'all हामी 2019 मा लगभग आधा बाटो छौँ। सम्झनु ...
तिम्रो विचार के हो? के यो सही वा नाव हो?
के तिनीहरू अझै पनि उनीहरूलाई यस्तो बनाउँछन्?
#Mynaturalhairextensions मा वीआईपी क्लबमा सामेल हुनुहोस् ...